LAMISAIBO indray izao no malaza
Lanja Miakatra Sy Ampy Isam-BOlana na LAMISAIBO. Io indray no fenitra vaovao malaza raha hiady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Mifototra amin’io nanomboka tamin’ny herinandro lasa teo ny mpandrindram-paritra ONN Boeny hahazoana mampihena ny taha izay efa tafakatra hatran’ny 14,9%.
Nosafidiana manokana ny kaominina ambanivohitra Bekobay, distrika Mahajanga II, manan-karena amin’ny resaka fambolena voamaina, haninkotrana, vary ary voanjo. Efa nisy ihany ny fanentanana natao tamin’ny taon-dasa tao amin’ny kaominina Andranoboka fa noho ny fisian’ny kolo-tsaina sy fomba amam-panao dia tsy tafita ny hafatra. Volaza mantsy fa fady sy voarara ny mihinam-bary ny alatsinainy, atody ny talata… kanefa sakafo ilain’ny vatana avokoa ireo. Rehefa tsy nahomby io tetika io tao Andranoboka dia Bekobay indray ny manaraka.Nanazava tamin’ny mponina ny tale mpanatanteraka ONN-PPNNC Seecaline, Rakotosalama Jean fa manomboka amin’ny fahaterahan’ny zaza ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Namafisin’ity tale ity fa tsy azo atao ny manao tsinontsinona ny nonon-dreny. Tokony hahazo 500 grama mantsy ny zaza eo anelanelan’ny 1 sy 5 volana, 300 grama eo anelanelan’ny 6 sy 11 volana ary 200 grama kosa eo anelanelan’ny 12 sy 24 volana.
Nampianarina ireo ray sy reny, araka izany, ny Lanja Miakatra Sy Ampy Isam-BOlana hahafahan’ireto farany miantoka ny fitomboan’ny zanany ara-dalàna. Fototra iaingana ny fampiasana ireo sakafo hita ao an-tanàna manomboka amin’ny fahandroana ka hatrany amin’ny fitahirizana. Voatavo, akondro, ampiarahana amin’ny koba-mangahazo na katsaka dia efa hahazoana sakafo feno otrik’aina. Fantatra fa feno sakafo ao amin’io distrikan’I Mahajanga II io fa ny fikarakarana no tsy hain’ny mponina tsara. Misy toby SEECALINE miisa 76 ao amin’ny ONN Boeny ka zaza miisa 31 109 eo anelanelan’ny 1 sy 24 volana no efa noraisin-tanana tamin’ny taona 2010. Amin’ity 2011 ity kosa dia misy kaominina 18 mila entanina.
Nandritra ny fanentanana momba ny LAMISAIBO tao Bekobay. (Sary : UCOM Boeny)